Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguAlvaro
Indlu yam inkulu inegadi eninzi, ikhululekile kwaye ithule kakhulu, ikulungele ukuphumla emva kosuku olude lokuhambahamba edolophini. I-master suite yeyona inkulu endlwini, inkulu kakhulu inegumbi lokunxiba, igumbi lokuhlambela elikhethekileyo kunye ne-whirlpool. Umntu otshatileyo onombono we-pool apho unokulala khona kwi-hammock ukuze uphumle. Sisondele kwisikhululo seenqwelomoya, ihlathi likaRodrigues Alves kunye neZiko leNgqungquthela leHangar. Kwindlela ephambili sinezithuthi zikawonke-wonke eziya naphina esixekweni.
I-suite ikhululekile kwaye izolile kakhulu, inebalcony ejonge phambi kwendlu, apho iindwendwe zinokuphumla zilele kwi-hammock, okanye zonwabele ukuba newayini okanye ukufunda incwadi. Igumbi lokuhlambela kwabelwana ngalo kunye negumbi elisecaleni komnyango, kodwa ngokungena ngaphakathi kwigumbi elinika ukufikelela kwikhawuntara ye-sink kunye nendlu yangasese kunye nocango lweshawari. Ikhitshi yabelwa kunye nezinye iindwendwe, kodwa ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo zokupheka eziyimfuneko kunye namalungiselelo okutya, kwaye indawo yokuhlamba yenzelwe iindwendwe.
Ikhompleksi apho i-condominium ikhona yindawo ezolileyo kwaye eqhelekileyo. Kwisitalato esikhulu se-complex, kufuphi nomnyango we-condominium, sifumana iintlobo ezahlukeneyo zeenkonzo, ezifana nezitolo ezinkulu, iikhemesti, ii-ATM, ii-greengrocers, ii-bakeries, ii-pizzerias, phakathi kwabanye.
Umbuki zindwendwe ngu- Alvaro
Sidla ngokuba nomntu endlini onoxanduva lokucoca nokulungelelanisa indlu. Xa ndizifumana ndiseBelém, ndikwabelana ngendlu yaye ndiyakuvuyela ukukwazi ukutshintshiselana ngeembono neendwendwe.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Souza